Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား)
Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား) ကဘာလဲ။
ကျောရိုးမကြီး၏ လည်ပင်းပိုင်းကိုအရိုး (ကျောရိုးဆစ်) ၇ခုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီးခေါင်းအုံးကဲ့သို့ သောအချပ်ပြား (disc)များဖြင့် ပိုင်းခြားထားပါသည်။ ထိုအချပ်များသည် ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းထိခိုက် မှု တို့ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။
အရိုးများကြားတွင် ကြားခံကူရှင် အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးခေါင်း နှင့် လည်ပင်းကိုကွေးညွှန့် ရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ Cervical disc syndrome သည် ကျောရိုးမ၏ လည်ပင်းအပိုင်းမှ နာကျင်မှုများ ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။
Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Cervical disc သည် ရုံးအလုပ်သမားများ နှင့် ကျောင်းဆရာများကဲ့သို့ အလုပ်အကိုင် များတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ အသက် အလယ်အလတ်များတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။
Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လည်ပင်းနာခြင်း၊ထုံကျဉ်ခြင်းတို့သည် ပခုံး၊ ကျောအပေါ်ဘက်၊ လက်မောင်း နှင့် လက် အထိရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့သူများတွင် အားနည်းခြင်း၊ကိုယ်ဟန်အနေအထားမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်ရာတွင်ခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ဖောင်းကား၍ဘေးထွက်လာသောအချပ်ပြားများ(bulging disc)ကြောင့် ဖြစ်သောနာကျင်မှုသည် ချောင်းဆိုးနေချိန် ရယ်နေချိန် လှုပ်ရှားနေချိန် တွင် ပို၍ ဆိုးရွှားပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြမထားသောအခြားလက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍သင့်ဆီတွင်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေသည်ဟုစိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
လမ်းလျှောက်ရာတွင်ခက်ခဲခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ခြေလက်များလှုပ်မရခြင်း နှင့် ဆီးဝမ်းမထိန်း နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားပါကဆရာဝန် နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းသည် သင်၏အခြေအနေကောင်းမွန်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အများစုသည် အသက်ကြီး၍ disc များယိုယွင်းပျက်ဆီးလာမှု ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်နေဟန်ထားမမှန်ကန်မှု နှင့် ပစ္စည်းများအားစိုက်၍မချီရသောအလုပ်လုပ်ရခြင်းသည် Cervical disc ကိုပို၍ဆိုးရွှားစေပါသည်။ disc များသည် တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးလာပြီးပါးလာပါသည်။ disc များကြားမှနေရာသည် ကျဉ်းမြောင်းလာပြီးကျောရိုးဆစ် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုပွတ်တိုက်လာပါသည်။
ကျောရိုးဆစ် ၏ အစွန်းနားများပွန်းပဲ့ ပျက်စီးလာပါသည်။ ထိုအခါ အရိုးအတက်များ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကျောရိုးတွင်းရှိ နာဗ့်ကြောမကြီးကိုစတင် ဖိမိပါတော့သည်။ နာဗ့်ကြောသည် အနှောင့်အယှက် ခံရသောအခါ နာကျင်ခြင်း၊ ကျိန်းစပ်ခြင်း၊ ထုံထိုင်းခြင်း နှင့် အားနည်းခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အလားတူပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဒဏ်ရာရမှု များသည် disc ပတ်လည်ရှိ အရိုးနှအထူများကိုထိုးဖောက်ကာကျောရိုးတွင်းရှိ နာဗ်ကြောမကြီးကိုဖိ နိုင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Cervical discကိုဖြစ်ပွားနိုင်ချေမြင့်စေသည့် အကြောင်းရင်းများများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာ-
လူလတ်ပိုင်းတွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။
ရုံးလုပ်သား၊ ကျောင်းဆရာကဲ့သို့ အလုပ်အကိုင်များ
လေးဖက်နာရောဂါ နှင့် အရိုးပွရောဂါ ရှိခြင်း
Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ယခုဖော်ပြထားသည့်အချက်အလက်များမှာဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက် များနေရာတွင် အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက် သိရှိလိုသောအချက်အလက် များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲံ့အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Cervical disc ဟုတ်မဟုတ်ကိုဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
လည်ပင်းအရိုးဆစ်အားဓါတ်မှန် ရိုက်ခြင်း နှင့် ခန္ဓါကိုယ် စစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြင့် ရောဂါ အဖြေရှာ နိုင်ပါသည်။ MRI (သံလိုက်ဓါတ်မှန်)ရိုက်ခြင်း၊ electromyography နှင့် နာဗ့်ကြော၏ ကူးလျှောက်ခြင်းအလျင် ကိုစမ်းသပ်သော EMG,NCV တို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Cervical Disc (လည်ပင်းအဆစ်ကြားအချပ်ပြား) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အများစုကိုနာကျင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အရောင်ကျဆေးများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကုသနိုင်ပါသည်။ အရိုးအထူးကု၊မေ့ဆေးအထူးကု၊အာရုံကြောအထူးကုဆရာဝန်တို့ဖြင့် ပြသနိုင်ပါသည်။ ရှေးရိုးစွဲကုသခြင်းများကိုလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ရှေးရိုးစွဲကုသခြင်းများတွင်နာသောနေရာပေါ်သို့အပူကပ်ပေးခြင်းနဲ့အထူးလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်ပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်သွားတတ်ပါသည်။ အခြားကုသမှုများဖြင့်မသက်သာမှသာနောက်ဆုံးနည်းလမ်းအနေဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကို ပြုလုပ်ပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကCervical disc ကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများသည် Cervical disc ကိုကုသသောနေရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်နှင့်တွေ့ဆုံမှုများကိုသေချာလုပ်ပါ။ မညွှန်းထားသောဆေးများကိုမသောက်သုံးပါနှင့်။ လက္ခဏာများသက်သာလာသော်လည်းဆေးကိုရပ်မပစ်ပါနှင့်။
ထိုင်ရာနှင့် လမ်းလျှောက်ရာတွင် ကိုယ်နေဟန်ထားကိုမှန်ကန်စွာထားပါ။
မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားပါကခါးပတ် ပတ်ပါ။
အိပ်ယာပေါ်တွင် လဲလျောင်းသောအခါ ခေါင်းနှင့် လည်ပင်းအောက်တွင် ခေါင်းအုံးတစ်ခုကိုထားပါ။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသောလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပါ။ လည်ပင်းကို ဖြည်းဖြည်းကွေးပါ ဆန့်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပါ။
လည်ပင်ကျောရိုးဆစ်အားဒဏ်ရာမရစေပါနှင့်။ အားကစားများ ပြုလုပ်ရာတွင် အကာအကွယ် ပေးသောပစ္စည်းများကိုဝတ်ဆင်ပါ။
Cervical Degenerative Disc Disease. http://www.spine-health.com/conditions/degenerative-disc-disease/cervical- degenerative-disc-disease. Accessed January 8, 2017.
Cervical Degenerative Disc Disease Symptoms and Diagnosis. http://www.spine-health.com/conditions/degenerative-disc- disease/cervical-degenerative- disc-disease-symptoms-and- diagnosis. Accessed January 8, 2017.
What Is Degenerative Disc Disease?. http://www.spine-health.com/conditions/degenerative-disc-disease/what- degenerative-disc- disease. Accessed January 8, 2017.
Todd AG. Cervical spine: degenerative conditions. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2011;4(4):168-174. doi:10.1007/s12178-011- 9099-2.